Ihe nrụpụta akpa ego akpa nke China n'akụkụ 3 EVERGREEN
Site na mmekorita anyị na Njikọ Nkwado Sustainable® How2Recycle® mmemme, anyị nwere ọtụtụ nhọrọ maka akpa nchekwa na-atụpụtagharịa.
Mpempe akpa akara akụkụ 3 nwere ike imegharị. Akpa akpa n'akụkụ atọ na-enye ụzọ dị mfe, dị ọnụ ahịa maka nnukwu ngwaahịa ma ọ bụ obere ngwaahịa. Akpa ndị a bụ ngwọta dị ọnụ ala, dabara adaba maka ịgbatị ndụ nchekwa nke ọtụtụ ngwaahịa nri.
Nhọrọ anyị dị ugbu a gụnyere akpa na-enweghị mgbochi na ihe mgbochi 3 akpa akpa akara nke na-egosipụta uru ndị a:
Magburu onwe ihe mgbochi ka mmiri multilayer Ọdịdị
Nkwado ngwaahịa FDA maka ịkpọtụrụ nri ozugbo
Njirimara 5 ọwa mkpọtụ mkpọtụ mkpọchi mkpọchi mkpọchi
Kwuru maka How2Recycle® Ụlọ ahịa dobe-apụ
Akara maka How2Recycle@ mbadamba ihe n'ime ụlọ ahịa.
Obere ọnọdụ mbido akara dị ala - na -enye ohere ịgba ọsọ ọsọ dị elu ụdị/jupụta/akara ngwa
Nnukwu nguzogide okpomoku - na -enye ohere ogo ụlọ mmanya akara maka ngwa ngwa ụdị/jupụta/akara ọsọ
Belata ihe ize ndụ nke ire ọkụ na nkwarụ akpa n'oge akara
Ọmarịcha gloss na idoanya
Ihe mgbochi ọkọlọtọ na nnukwu ihe mgbochi ikuku oxygen
Ọ dị na Mbinye aka mpempe akwụkwọ Mmetụ, Matte na Gloss
Mpempe akpa akara akụkụ 3 nwere ike imegharị. 3 akpa akpa dị n'akụkụ akpa bụ akpa ohiri isi. Site na oghere n'otu akụkụ. Akpa akpa mkpuchi akụkụ 3 anyị nwere ike ịmegharị nwere ike na -agba ọsọ dị elu na igwe si na akara mkpuchi (FFS). A na -ahazi nha ka ihe ịchọrọ. Njirimara dị iche iche dị maka gị, dị ka windo doro anya iji lelee n'ime ngwaahịa, akwa akwa maka imepe ngwa ngwa, mkpọchi mkpọchi maka imepe na nso nso, na kpọgide oghere iji nweta ngosi dị mma na shelf, akụkụ okirikiri maka mmetụ dị mma.
Enwere ike iji ha maka ịkwakọ nri ma ọ bụ ngwaahịa na-abụghị nri, mkpụrụ osisi akpọnwụ, nri anụ ụlọ dị mfe, swiiti, nsí ezé.Meet mkpa nke ngwaahịa ọ bụla, anyị nwere ike ịme akpa ụdị ka amasị gị dị ka “T-shirt shape”. Ọ nwere ike ịdị ogologo ma dịkwa warara ịkwakọba ngwaahịa dị gịrịgịrị, dị ka akwụkwọ nnwale, ma ọ bụ nwee ike bụrụ oghere sara mbara maka nri ndị chọrọ ntụtụ.
Mpempe akwụkwọ akara akụkụ 3 nwere ike imegharị dị mma ịkwakọ swiiti, nri jụrụ oyi, nri anụ ụlọ na ngwaahịa ndị ọzọ.
Mpempe akwụkwọ akara n'akụkụ 3 nwere ike ịtụgharị ọzọ nwere ike ịbụ mbipụta ma ọ bụ nke anaghị ebipụta, na-enye anyị ohere ịhazi nha akpa dị iche iche.
Akpa akpa dị n'akụkụ 3 a na -atụgharịgharị ga -enye ihe mgbochi ma ọ bụ ihe mgbochi dị elu maka ndụ ogologo ndụ
A na-eme ihe mkpuchi akpa nwere akụkụ 3, nke pụtara na ejikọtara akwa dị iche iche ọnụ iji mepụta ihe mgbochi dị elu iji mee ka ọdịnaya dị ọhụrụ.
A na -etinyekarị akwa anya mmiri n'ime akpa a iji nye ohere imeghe dị mfe.Dabere na mkpa gị, anyị nwere ike ịhapụ akụkụ ọ bụla nke mepere emepe, ka ngwaahịa gị wee jupụta n'aka ma ọ bụ jiri aka mejupụta ngwaahịa gị.
Na -enyere onye ahịa aka imeghe ngwungwu na -ejighị mkpa.
(PTC Pịa imechi) egwu dị iche iche na -abụ otu, okpukpu abụọ na atọ, nwere ụda/apụla agba dị iche iche.
Na -eme ka oghere kwụ ọtọ kwụ ọtọ gafee ngwugwu ahụ, yana obere mbọ.
Akụrụ ezughị oke-Maka njem dị mfe nke ngwaahịa.
Mwepụ nke ọnụ dị nkọ, na -enye ojiji ndị ahịa ka mma.
Na -eme ka a kwụpụ ebe maka ịzụ ahịa
Mechaa Varnish edebanyere aha
Varnishes edebanyere aha, na -enye ngwụcha matt na gloss na imewe, ka ụdị/ ndị nrụpụta wee nwee ike mepụta oke ọpụrụiche.
Ruo 10 agba
Na -enye mbipụta nkwado na mkpado ma ọ bụ gravure.
Ihe mgbochi ọkọlọtọ
Ntụ ọka, sugar
Nri oyi kpọnwụrụ
Ngosiputa Ngwa na Nlekọta Onwe Onye
Industrial & nkwakọ ngwaahịa ndị ọzọ
Ihe mgbochi dị elu
Nri, Mkpụrụ na Ngwakọta Ngwakọta
Ọgwụgwọ anụ ụlọ
IHE MERE 100% zuru RECYCLABLE POUCH
Plastic bụ ihe na -adigide, dị fechaa ma dịkwa ọnụ ala. Kwa afọ, a na -arụpụta ihe karịrị nde tọn plastik 100 n'ofe ụwa. Ihe dị ka ijeri paịnd abụọ nke ihe ọhụrụ plastik ka a na -eme ka ọ dị ọhụrụ, na -afụcha ya, na -etinye ya ma na -awụnye n'ime nde ngwugwu na ngwaahịa. N'ịchọ ihe ngwọta iji merie ihe ịma aka nke ịchọta ụzọ ọzọ na -adigide, nkwakọ ngwaahịa Jiahe ewepụtala obere akpa polyethylene (PE) 100%. Ngwọta ahụ na -eji naanị otu akụrụngwa n'ime ihe owuwu ya, polyethylene, ihe na -eme ka nrụgharị ya dị mfe ma na ọkwa mbụ na mgbe oriri, ebe ọ bụla enwere yinye, ọ ga -ekwe omume iji akara mgbazigharị mba ofesi: 4 (LDPE) kama 7 (ndị ọzọ), na -anọchite anya uru maka yinye nrụgharị niile.
Nke gara aga: Ụlọ ọrụ mmepụta ihe maka obere ihe mgbochi mgbochi - akụkụ 3 emechiri emechi & obere akpa akpa/akpa akpa rọba/akpa rọba nri - EVERGREEN
Osote: Akpa akpa dị larịị
Ụlọ ahịa na-ebubata ngwongwo ndị a na-ejigharị emegharị emegharị
Mkpa akpa akpa/akpa akpa maka ngwugwu nri ...
obere akpa/Zip mkpọchi akpa rọba/kwụ ọtọ Po ...
Azịza obere akpa/Pet nri akpa/Njikere eri nri pac ...